China Natural Muscovite mica poda fekitori uye vanotengesa | Huajing
Huajing cosmetic giredhi muscovite mica inotora Chinese zvicherwa mbishi zvinhu, izvo zvicherwa zvinobva kuLingshou County, Hebei dunhu, China. Iwo mugodhi une rezinesi rekuchera. Izvo zvinoshandiswa hazvina asbestos, simbi inorema inosangana nezvinodiwa zve cosmetic.
WM-60 sirivha chena 82 - 85 150 ～ 170 7 - 8 ≤1 ≤1 ≤10 ≤3 ＜ 0.5 60 0.22 kubwinya mumvuri weziso
WM-100 sirivha chena 82 - 85 90 ～ 100 7 - 8 ≤1 ≤1 ≤10 ≤3 ＜ 0.5 60 0.22
WM-200 sirivha chena 84 kusvika 89 30 ～ 40 7 - 8 ≤1 ≤1 ≤10 ≤3 ＜ 0.5 70 0.20
WM-325 sirivha chena 84 kusvika 89 18 23 7 - 8 ≤1 ≤1 ≤10 ≤3 ＜ 0.5 80 0.16 kubwinya kwepamusoro nheyo, mumvuri weziso, BB cream, CC cream, blusher
WM-600 sirivha chena 84 kusvika 89 9 - 12 7 - 8 ≤1 ≤1 ≤10 ≤3 ＜ 0.5 90 0.14
WM-1250 sirivha chena 83 ～ 88 6 ～ 9 7 - 8 ≤1 ≤1 ≤10 ≤3 ＜ 0.5 70 0.12
refractoriness ruvara Mohs kuomarara elastic coefficient pachena Nzvimbo yakanyunguduka simba rinokanganisa kuchena quotient
650 ℃ Sirivha chena 2.5 （1475.9 ~ 2092.7） × 106Pa 71.7 ~ 87.5% 1250 ℃ 146.5KV / mm > 99.5%
Huajing cosmetic giredhi muscovite mica inotora Chinese zvicherwa mbishi zvigadzirwa, izvo zvicherwa zvinobva kuLingshou County, Hebei dunhu, China. Iwo mugodhi une rezinesi rekuchera. Izvo zvinhu hazvina asbestosi, simbi inorema inosangana nezvinodiwa zvezvizoro .
Izvo zvigadzirwa zvinogona kusangana zviviri zvakasiyana zvinodiwa: matte uye inopenya.Ukuru hwezvigadzirwa hwakatangira kubva pa5μm～200 μm.Zvechokwadi, zvigadzirwa zvinogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi zvemafuta ekumwa kukosha kana iyo kara yakakosha chikumbiro .Nhasi, cosmetic giredhi muscovite inonyanya kushandiswa mune hwaro, ziso mumvuri, blusher, uye talcum upfu, nezvimwe.
Chii chinonzi Mica Powder Mune Zvekuita Kwekuzora?
Mica ndeye yakasarudzika chicherwa chigadzirwa ine yakakwira makemikari kugadzikana uye inert zvachose chinhu, saka yakachengeteka, isina-chepfu, isina kukuvadza uye yakakodzera yezvizoro. Mica ndechimwe chezvinhu zvinoumba girenayiti, uye kugadzikana kwayo kwemakemikari kwakafanana neya granite
Mica wafer inogona kudzivirira ultraviolet uye infrared mwaranzi, saka iri yakanakisa anti-ultraviolet mumiriri wezvizoro. Nekuti iri yakachena yakasikwa, isina-chepfu uye haina kukuvadza, ine zvakanakira izvo zvekugadzira organic anti-ultraviolet vamiririri vasina. Nekuti wafer yakatetepa zvakanyanya uye kugona kufukidza kwakasimba zvakanyanya, zvishoma chete zvigadzirwa izvi zvinodikanwa kuti zviumbe imwe isingaonekwe dziviriro yeanti-ultraviolet mudziviriri uye inopenya pamusoro peganda.
Nekuti mica wafer yakanaka uye kufukidzwa paganda hakuendwe, hakukanganisa kufema kweganda uye kunoita kuti ganda rinzwe kugadzikana.
Mhute haugone kupinda mukati memaya chitete, iyo inogona kutadzisa kubuda kwehutu hweganda painoshandiswa mukunyorovesa zvigadzirwa.
Simba rekugadzira: 1500tons / mwedzi
Apex 500KG / 25KG / 20KG, (PP kana Pe bhegi)
Nzira dzekutakura: mudziyo kana huwandu
Zvadaro: calcined mica upfu
Yakaoma Ground Muscovite Mica
Muscovite Uye Phlogopite Mica